Tag: njigharị | Martech Zone
Oogba Morezụkwu Ọtụtụ Ndị Azụta na Mbelata Ihe mkpofu Site na Ọgụgụ Isi
Na Tọzdee, Septemba 13, 2016 Na Tọzdee, Septemba 13, 2016 Jenn Lisak Golding
Edere arụmọrụ nke ọdịnaya dị mma, na-ekwenye 300% karịa na-eduga na 62% dị ala karịa ahịa ọdịnala, ka DemandMetric na-akọ. Ka a sịkwa ihe mere ndị ahịa ọkaibe gbanwere dollar ha na ọdịnaya, n'ụzọ buru ibu. Otú ọ dị, ihe mgbochi ahụ bụ na ezigbo akụkụ nke ọdịnaya ahụ (65%, n'eziokwu) siri ike ịchọta, echeghị echiche ma ọ bụ na-adịghị amasị ndị na-ege ya ntị. Nke ahụ bụ nnukwu nsogbu. "I nwere ike inweta ọdịnaya kachasị mma n'ụwa," kesara